Denizli Ski Center bụ ọkacha mmasị ọhụrụ nke Ndị Ọrụ Nleta Dalịrị .. RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Aegean20 DenizliDenizli Ski Center bụ Ọkacha mmasị Ọhụrụ nke Ndị Ọrụ Nleta
23 / 01 / 2020 20 Denizli, Mpaghara Aegean, General, Turkey, TELPHER
ebe egwuregwu skul ọhụrụ maka ndị ọkachamara na njem
Aegean kasị skai eme na aghọwo otu n'ime oké mkpa adreesị na njem ngwugwu njem, karịsịa Turkey si Aegean na Mediterranean anabata ndị ọbịa, gụnyere anọ site. Denizli Ski Center, nke akpọrọ aha ya na otuto site na ntuziaka ndị njem na ndị ọbịa, ka amaara maka akụrụngwa ya na oke snow.
Denizli Ski Center, nke ndị isi obodo mepere emepe maka Denizli nwere olu na njem nlegharị n'oge oyi, abụrụla ọkacha mmasị nke ụlọ ọrụ ndị njem na ndị njem nlegharị anya. Denizli Ski Center, nke dị na Bozdağ, n'etiti oke nke Nikfer District nke Tavas, nke ghọrọ ihe dị mkpa na nke kachasị amasị na nchịkọta njem nke ụlọ ọrụ njem, amalitela ịnabata ọtụtụ ụgbọ ala njem kwa ụbọchị. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ bụ ezumike ọkara nke semester, ụlọ ọrụ ahụ, nke ndị ọbịa jupụtara n'oké idei mmiri, na-achọsi ike n'ihe gbasara njem, ọrụ enyere na ọdịdị nke snow. Mehmet Teke, Onye isi oche nke Obodo isi obodo BELTAŞ, kwuru na Denizli Ski Center na-aga n'ihu na-achọsi ike, na ụlọ ọrụ ndị njem na-achọsi ike na ebe sọọsọ. Teke kwuru na ha bụ ndị na mgbe niile zutere njem, "Anyị na ụmụ amaala na-ahọrọ anyị n'otu n'otu nakwa dị ka skai tour ụlọ ọrụ na Turkey n'elu mkpa," ka o kwuru.
"Denizli nwekwara ihe ikwu n'ọgagharị n'oge oyi"
The Denizli Mayor Osman Zolan, Denizli Ski njem ụlọ ọrụ na-na-a mmasị nke ọma, karịsịa gburugburu Aegean na Turkey kwuru na ha anọgide na-ẹnyene site gụnyere Mediterranean. N'imesi ike na nnukwu ogige ski nke Aegean bụ ntinye dị oke mkpa maka Denizli na Denizli nwere ọnụ n'okwu njegharị maka oge oyi na ụlọ ọrụ ahụ, Onye isi ala Zolan kwuru, "Anyị na-echere onye ọ bụla chọrọ ịnụ ụtọ snow na egwuregwu ski na Denizli Ski Center anyị".
Afọ ojuju na-eleta ndị njem, ụlọ ọrụ ndị njem na-enwe obi ụtọ maka ndị ọbịa na ndị ọkachamara na-eme njem nleta bụ ndị kwuru banyere ihe owuwu ahụ na Denizli Ski Center.
Gökhan Kırmızı (Ntuziaka njegharị): Denizli Ski Center bụ ihe ama ama na nso nso a. Ọ bụ ihe ọzọ maka ndị ọrụ njem nlegharị anya n'oge oyi, ọ dịkwa mma maka ndị ọbịa anyị chọrọ ịra ezumike ọkara afọ agụmakwụkwọ. Enwerekwa ike na mbata nke ezumike 15. Taa, anyị na otu narị mmadụ asatọ si Marmaris bịa. Ha nwere obi uto. Ọ bụ ebe a na-akwụ ụgwọ nke ukwuu n'etiti ụlọ ezumike mmiri m garala. Echere m na ọ ga-erute ọkwa ndị ọzọ ma ama mma n’ọdịniihu. Ọ dị mma iru iru.
Mehmet İlhan (Ntugharị Ntugharị): Enwere nnukwu arịrịọ site na Muğla maka Denizli Ski Center. Ndị a mara mma, chebe na ebe enweghị ihe mberede. Ahịa ga-abụ ihe ezi uche dị na ya maka ndị njem nleta ụlọ anyị na ọbụna karịa maka ndị njem si mba ọzọ. Ọ bụ ebe a na-achọsi ike n'ihi na ọ dị nso n'obodo nwere ọnọdụ ihu igwe dị ọkụ dị ka Muğla, Aydın na İzmir. Enwebeghị nloghachi na-adịghị mma site n'aka ụmụ amaala anyị wetara ruo taa. Anyi na-ekele Denizli Metropolitan Obodo.
Onur Orhun: Anyị si Bodrum na nke mbụ. Mara mma. Anyị na-aga Davraz tupu. Nke a bụ oge mbụ anyị bịara n'akụkụ a, enwekwara m ya obi ụtọ nke ukwuu. Ihu igwe mara mma, ogo snow dị oke mma. Ana m akwado mmadụ niile ebe a. Anyị ga-abịa ọzọ ozugbo anyị nwere ohere.
Burak Çıtır: Anyị si İzmir wee bịa otu ụbọchị. Anyị bịara maka oge mbụ ma ọ dị elu karịa ka anyị tụrụ anya. Anyi na-ekele Denizli Obodo ukwu, ha emeela ezigbo ego. A choro uzo di otua na mpaghara. Qualitydị snow dị mma, ụzọ egwu dị mma, enwekwara ebe dị mma maka novices. O nwere ebe a na-eme nzuzu maka ndị na-abịa ezinụlọ na ụmụaka. Igwe ije na-aga ije nke ọma. Ahụike nye ndị mere.
Kaan Çamtepe: Nnukwu ụlọ ọrụ mara mma. Nwere ike iso ụmụ gị, enwere ohere dị mma maka ịme izu. Ahịa nwere ezi uche. Xdị nso ya mara mma nke ukwuu. Anyị si Izmir n’ime awa atọ. Nke a mara oke mma.
Çağdaş Börühan: Esi m Lüleburgaz. Enwere m mmasị ebe a n'ezie. N'ezie, atụghị m anya nke a. Trackszọ ndị ahụ dị ogologo, na-elekọta nke ọma ma mara mma. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị bịara. Ọ dị elu karịa atụmanya. Enwere m obi ụtọ na ọ dị mma karịa ịdị mma nke snow, ogologo ụzọ egwu na ihe nretọ.
Turgut Ölemez: Esi m Van bịa. Anyị agaruola ọtụtụ ebe egwuregwu egwuregwu egwuregwu tupu, mana Denizli bụ otu n'ime ndị nwere ọmarịcha egwu. Qualitydị snow dị mma, ụzọ egwu dị ụtọ.
Ihe nnọchianya nke Kemer "Olympos cable car"
Yıldıztepe Ski Center ghọrọ ọkacha mmasị maka ndị ezumike
Ugwu Mountain Ski Center
Abụọ ndị ọkacha mmasị na njem nlegharị ụkwụ
"Ebe a na-akpọ Denizli Ski Center"
Ndị na-eme ski 'Favorite
Ọhụrụ ọkacha mmasị nke Winter Sports Kaçkars
Ọhụrụ ọkacha mmasị nke ndị na-egwu ski Palandöken
Ngwunye kachasị mma ụgbọala bụ ụgbọ okporo ígwè
Njem oge ezumike Denizli